XCP-NG 8.1 iri pano uye inouya zvichibva paCentOS 7.5, kugadzirisa kweEFI uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Kutanga kwe iyo itsva vhezheni yeprojekti XCP-NG 8.1que inogadzirwa sekutsiva kwemahara yepuratifomu yepamutemo Citrix Hypervisor (yaimbodaidzwa kuti XenServer) kuendesa nekutarisira maturusi emakore.
1 Chii chitsva muCitrix Hypervisor 8.1?
Chii chitsva muCitrix Hypervisor 8.1?
Nokuburitswa kweshanduro nyowani kwete chete Citrix Hypervisor 8.1 mashandiro anoitwazveasi zvakare inopa kumwe kugadzirisa yazvinomira pachena kuti iyoKuisa mifananidzo yeshanduro nyowani inogadzirwa pahwaro hweiyo CentOS 7.5 package uchishandisa iyo Xen 4.13 hypervisor, pamwe akawedzera kugona kushandisa imwe Linux kernel inoenderana nebazi re4.19.
Imwe yeshanduko inomira mushanduro iyi nyowani ndiyo iyo Tsigiro yekurodha vaenzi masisitimu muEFI mode inosimbiswa. Chakazivikanwa ndechekuti rutsigiro rwakachengeteka rwebhoti haruna kutakurwa kubva kuCitrix Hypervisor, asi rwakavakwa kubva pakutanga kuti ridzivise mharadzano nekodhi yekodhi.
Zvakare mukati mezvinhu zvitsva, zvinomira pachena kuti suye yakawedzera rutsigiro rweXAPI plugins (XenServer / XCP-ng API) zvakafanira kugadzira makopi ekuchengetedza emachina chaiwo, kutora chikamu chemukati me RAM yavo.
Vashandisi vaive nemukana wekudzoreredza VM pamwe nemamiriro ekumhanya uye RAM mamiriro panguva yekuchengetedza, zvakafanana nekudzoreredza mamiriro ehurongwa mushure mekubuda munzira yekurara (iyo VM inomiswa pamberi pekuchengetedza).
Kune rimwe divi, zvinoratidzwa izvo kunatsiridzwa kwakaitwa kune inoisa, iyo ikozvino inopa maviri ekumisikidza sarudzo: BIOS uye UEFI. Iyo yekutanga inogona kushandiswa seye backup mune masisitimu kunoonekwa nyaya dzeEFI (semuenzaniso, zvichibva pa AMD Ryzen CPUs). Yechipiri inoshandisa imwe Linux kernel (4.19) nekukasira.
Zvakare vagadziri vakashanda kuendesa yakagadziridzwa kupinza kuita uye kutumira kunze kwemichina chaiyo muXVA fomati, pamwe ne zvakare zvirinani kuchengetedza kwekuita.
Yeimwe shanduko dzinomira mukuzivisa kweshanduro iyi nyowani ndeiyi:
Madhiraivha matsva eI / O akawedzerwa yeWindows.
Wakawedzera rutsigiro rwe AMD EPYC 7xx2 (P) machipisi.
Panzvimbo ye ntpd, chisingaperi chinobatanidzwa.
Tsigiro yevaenzi masisitimu muPV modhi yakadzikiswa.
Zvitoro zvitsva zvemuno izvozvi zvinoshandisa Ext4 FS nekutadza.
Wakawedzera rutsigiro rwekuyedza rwekuvaka matura emuno anoenderana neXFS FS (kuisirwa ye sm-yekuwedzera-madhiraivha package inodiwa).
Iyo module yekuyedza yeZFS yakagadziridzwa kuita vhezheni 0.8.2.
Kune avo vanofarira kuyedza iyi vhezheni itsva, unogona kuwana iyo 600 MB yekumisikidza mufananidzo kurodha pasi Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » XCP-NG 8.1 iri pano uye inouya zvichibva paCentOS 7.5, kugadzirisa kweEFI uye nezvimwe